ယူနီကုတ်ဆိုစွာ ဇာလဲ? | Great Arakan
Home Arakanese Font ယူနီကုတ်ဆိုစွာ ဇာလဲ?
မိန်း – ယူနီကုတ်(Unicode) ဆိုစွာ ဇာလဲ?
ဖြေ – ယူနီကုတ်ဆိုစွာ အများထင်နိန်ကတ်တေပိုင် ဖင့်(စာလုံး) တမျိုးမျိုးကို ပြောစွာ မဟုတ်ပါ။ အရွီးအသားတိဖြစ်တေ စာလုံး၊ အက္ခရာ၊ အမှတ်အသားတိကို လူအများသုံး ဘုံဖြစ်လာအောင် Unicode Consortium က ချမှတ်ထားရေ စံထားအတိုင်း သင်္ကေတ ကုတ်(code) ပြောင်းလဲစွာကို ဆိုလိုပါရေ။ ဇာဘာသာစကားက စာလုံး၊ အချက်အလက်တိကို ဖြစ်ဖြစ်၊ ခေတ်ပေါ် ဆော့ဖ်တ်ဝဲလ်တိနန့် သတင်းနည်းပညာတိမှာ အခြေခံ လုပ်ဆောင်စွာ၊ သိုမှီးစွာ၊ အပြန်အလှန် ပြောင်းစွာတိမှာ စံထားတခုတည်းနန့် သင်္ကေတ ကုတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပီးစွာကို ဆိုလိုပါရေ။
မိန်း – ယူနီကုတ် ရည်မှန်းချက်က ဇာလဲ?
ဖြေ – ယူနီကုတ် ရည်မှန်းချက်က ကဗာထက်မှာ ရှိရှိသမျှ ခေတ်ပေါ်၊ ခေတ်ဟောင်း အရွီးအသား စာလုံး၊ အက္ခရာတိုင်းကို လူအများ အလွယ်တကူ သုံးနိုင်ရေ၊ စံထားတခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပီးဖို့ပါ။ ယင်းအထဲမှာ နည်းပညာ သင်္ကေတတိ၊ အဖြတ်အတောက် ပုဒ်တိ၊ တခြား အရွီးအသားအဖြစ်သုံးရေ သင်္ကေတအားလုံး ပါဝင်ပါရေ။ ယူနီကုတ် စံထား(Unicode Standard)က စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ သတင်း၊ နည်းပညာ၊ လူနည်းစု စာပေ ဂဏ္ဍပေါင်းစုံကို အလွှာပေါင်းစုံက လူတိ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားပါရေ။ (ဆိုလိုချင်စွာက မြန်မာပြည်ထဲက ရခိုင်စာ၊ ကရင်စာ၊ ကယားစာ၊ မွန်စာ၊ ချင်းစာ၊ ရှိရှိသမျှ စာပေတိကို ယူနီကုတ်မှာ တခုချင်းစီ စံအဖြစ် အရေအတွက် ကြိုက်သလောက်ထားနိုင်ရေလို့ ဆိုလိုပါရေ။)
မိန်း – ယူနီကုတ်က ဘာသာစကား ဘလောက်လောက်ကို ကာမိပါဗျာလ်လေ?
ဖြေ – ပြောဖို့ခက်ပါရေ။ ယူနီကုတ်က ဘာသာစကားဆိုစွာထက်၊ အရွီးအသားတိကို သင်္ကေတကုတ် အဖြစ် ပြောင်းလဲစွာပါ။ ဘာသာစကားတခုစီမှာတောင် အရွီးအသားတိ အများကြီး ရှိနိုင်ပါရေ။ တချို့အရွီးအသားတိဆိုကေ အသုံးမပြုဘဲ သီလားရေ အနိန်အထားမှာ ရှိကတ်ပါရေ။ အလွယ်ကူဆုံးအဖြေက ကဗာထက်မှာ ရှိရှိသမျှ အရွီးအသားတိကို ယူနီကုတ် ပြောင်းထားဗျာလ်လို့ ဆိုရပါဖို့။ အေနောက်ကလိင့်ခ်မှာ Supported Scripts လားကြည့်နိုင်ပါရေ။ ယူနီကုတ်မှာ အယင် သမိုင်းခေတ်တိက အရွီးအသားတိ၊ အသုံးနည်းရေ ဒေသဆိုင်ရာ အရွီးအသားတိ၊ အဓိက သုံးစွာ မဟုတ်ဘဲ၊ ဒုတိယ၊ တတိယအနိန်နန့် သုံးရေ အရွီးအသားတိ၊ သီးသန့်ဆက်သွယ်ကတ်တေ ဘာသာစကားတိလည်း ပါဝင်ပါရေ။ ယကေလည်း အရွီးအသားတိကို တခါတည်း သင်္ကေတကုတ်ပြောင်းလိုက်စွာနန့် ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းတိမှာ တသမတ်တည်း သုံးနိန်လို့ မရနိုင်ရေအတွက်၊ အမြဲတမ်းတော့ ပြောင်းလဲပြုပြင်မှုတိ လုပ်နိန်ရပါဖို့သိမ့်။
မိန်း – ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းရို့မှာ ဘာသာစကားတိ ပေါ်ဖို့အတွက် ယူနီကုတ်အပြင် ဇာတိ လိုပါသိမ့်လေ?
ဖြေ – ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းရို့မှာ ဘာသာစကားတိ ပေါ်ဖို့အတွက် ယူနီကုတ်က အယင်ဆုံး စံထားတခုအနိန်နန့် အရွီးအသားတိကို သင်္ကေတကုတ်အဖြစ်ကို ပြောင်းပီးပါရေ။ ယကေလည်း ယင်းအရွီးအသားတိကို ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းထဲကို ရိုက်ထည့်ဖို့ ကီးဘိုး(keyboard)တိ၊ တခြား ထည့်သွင်းပီးရေပစ္စည်းတိ(input tools)၊ စာလုံးတိ(fonts)၊ နိစွဲပုံစံရို့ပိုင် ဘာသာစကားအချက်အလက်(language data)တိ၊ ဘာသာစကားကို တခြားဘာသာပြန်ပီးရေ ပြိုဂြမ်တိ လိုပါသိမ့်ရေ။
ယူနီကုတ်နန့် သက်ဆိုင်ရေ မိန်းဖြေတိကို ယူနီကုတ်ဝပ်ဆိုက် မိန်းဖြေဂဏ္ဍ နောက်က လိင့်ခ်တိမှာ https://home.unicode.org/basic-info/faq/ https://www.unicode.org/faq/font_keyboard.html လားကြည့်နိုင်ပါရေ။
အေလောက်ဆိုကေ ယူနီကုတ်ဆိုစွာ ဇာလဲဆိုစွာ သဘောပေါက်လောက်ဗျာလ် ထင်ပါယင့်။ ယူနီကုတ်စွာ မြန်မာဖင့်တိနန့် တခုလည်း မဆိုင်ပါ။ ဇာကင်ပျူတာ၊ ဇာဖုန်းမှာမဆို ဇာသူမဆို လွယ်လင့်တကူ သုံးနိုင်အောင်၊ ကဗာ့စံထားထဲမှာ ဝင်ဖို့ အရွီးအသားတိကို သင်္ကေတကုတ် ပြောင်းလဲပီးစွာကိုရာ ဆိုလိုပါရေ။ ယင်းပိုင် စံထားထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ကိုယ့်အရွီးအသားတိကို Unicode Consortium က သတ်မှတ်ထားရေ စံနှုန်းတိအတိုင်း လုပ်ပနာ၊ Unicode အဖွဲ့အစည်းဘားမှာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ လိုပါရေ။
ရခိုင်စာ အရွီးအသားတခုကိုလည်း စနစ်တကျ ဖန်တီးပနာ ယူနီကုတ် သတ်မှတ်ဖို့ လိုလာပါဗျာလ်။
အေနိန်ရာမှာ ဇော်ဂျီဖင့် အကြောင်းကို တစိချေ ရှင်းပြပါမေ။ ဇော်ဂျီက မြန်မာပြည်သားတိ ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းတိမှာ ပထမဆုံးနန့် အသုံးအများဆုံး ဖြစ်ခရေ ဖင့်တခုပါ။ စိတ်မကောင်းစရာက ဇော်ဂျီဖင့်ကို တကဗာလုံး စံထားထဲမှာ ပါလာအောင်၊ ယူနီကုတ်အထဲ ပါဝင်လာဖို့ ကြိုးစားစွာကို မတွိရပါ။ ယင်းအတွက်နန့်လည်း၊ ဇော်ဂျီဖင့်နန့် ရွီးထားစွာကို မြင်ချင်ကေ၊ ဇော်ဂျီဖင့်ကို အယင်ဆုံး ကင်ပျူတာ၊ ဖုန်းတိမှာ ထည့်သွင်း(Install)ဖို့ လိုစွာပါ။ ယူနီကုတ် စံထားထဲမှာ ဝင်ရေ ဖင့်နန့် ရွီးထားစွာဆိုကေ၊ တခုဖင့်လည်း ထည့်သွင်းစရာ မလိုပါ။ ဥပမာ – အေ Great Arakan ဝပ်ဆိုက်ကို ယူနီကုတ်နန့် ရွီးထားပါရေ။ ယင်းအတွက်နန့် အေဝပ်ဆိုက်ကို ဇာ ဖုန်း၊ ဇာ တပ်ဘလတ်၊ ဇာ ကင်ပျူတာ၊ ဇာ ဆမာ့တ်တီဗီ၊ ဇာ ဆမာ့တ်နာရီ မှာမဆို တခုဖင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစရာ မလိုဘဲ ဖတ်လို့ရနိုင်ပါရေ။ အေဝပ်ဆိုက်မှာ ပါရေ စာတိကိုရာ မှန်အောင် မမြင်ရဆိုကေ၊ ယင်းဖုန်း၊ ကင်ပျူတာ၊ တပ်ဘလတ် အစရှိစွာရို့မှာ ဇော်ဂျီဖင့်ကို ထည့်သွင်းထားလို့ပါ။ ပုဂ္ဂလိကအမြင်ကို ပြောရဖို့ဆိုကေ ဇော်ဂျီဖင့်က နောက်မှာ ကျန်ခဗျာလ်ဖြစ်လို့၊ ရှိကိုလားချင်ကေ ယူနီကုတ်ကို စသုံးဖို့ လိုလာဗျာလ်လို့ မြင်ပါရေ။
နောက် ဖင့် လုပ်ပုံလုပ်နည်းတိကို အချိန်ရစွာနန့် အေစာမျက်နှာမှာ တင်ပီးလားပါမေ။
Previous articleရခိုင်စာ ရှိဖို့လိုလာ?
Next articleအမေရီကန် ရနံစိမ်း ၁ စည် ၁၆ ဒေါ်လာအောက် ကျဆင်း